iMovie bụ ndị kasị ewu ewu video edezi software dị maka Mac. Ọ na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ ya ọrụ na ị nwere ike mfe wụnye ya na gị Mac nakwa dị ka iOS ngwaọrụ tinyere iPad na iPhone. iMovie akwado a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats na ị nwere ike mfe mbubata faịlụ site na ndị ọzọ formats kwa. Na-ewu ewu faịlụ formats-akwado site na iMovie agụnye MPEG, MOV na ụfọdụ MP4. Maka n'ịrụ ụfọdụ arụmọrụ na a video faịlụ, mbụ ị mkpa mbubata ya n'ime iMovie na mgbe ahụ ịrụ chọrọ ime ihe. Otú ọ dị e nwere mgbe a kpọmkwem faịlụ Ọkpụkpọ dị nnọọ jụ ina dị na iMovie. Dị otú ahụ a dịruru ná njọ, i nwere ike ịgbalị converting faịlụ n'ime ihe iMovie dakọtara faịlụ Ọkpụkpọ na mgbe mbubata ọzọ.
Part 1: Olee mbubata VOB ka iMovie on Mac?
Part 2: Gịnị a VOB video faịlụ-apụghị dị ka iMovie?
Ọ bụrụ na ị na-ejide elu a dịruru ná njọ ebe iMovie dị nnọọ jụ mbubata gị VOB faịlụ, mgbe ahụ, ebe a bụ obere workaround nke pụrụ inyere gị mezuo nke a ọrụ ngwa ngwa. Na ọtụtụ ndapụta, iMovie jụ mbubata ụfọdụ faịlụ na ụdị ruru ka ihe dị iche na ha codec. Iji merie nsogbu a, ị pụrụ ịtụle nbudata a video faịlụ Ọkpụkpọ Ntụgharị nke ga-tọghata gị VOB faịlụ n'ime ụfọdụ iMovie anabata faịlụ Ọkpụkpọ mere na ị nwere ike mfe mbubata ya.
E nwere ọnụ ọgụgụ nke video converters na ahịa ma Wondershare Video Converter Ultimate for Mac-ewere dị ka ndị kasị na kasị oru oma otu! Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Eburu ntụkwasị obi nke ndị a pụrụ ịdabere na ika dị ka Wondershare. N'elu ya notch atụmatụ adọta ndị ahịa na-eme ka software uru a na-agbalị.
The isi atụmatụ nke Wondershare Video Converter Ultimate maka Mac-agụnye:
Nkwado maka a dịgasị iche iche nke faịlụ formats: The software akwado a dịgasị iche iche nke faịlụ formats gụnyere audio, video na DVD faịlụ formats.
Fast faịlụ akakabarede: Wondershare si Video Converter Ultimate for Mac emesi ya ahịa na dị ukwuu dị ka ugboro 30 ngwa ngwa akakabarede ọsọ karịa ya asọmpi.
Akakabarede enweghị adịkwa àgwà: Otu n'ime ndị kasị akpali akpali atụmatụ awa site Wondershare Video Converter Ultimate bụ ya lossless akakabarede atụmatụ nke pụtara na software nwere ike tọghata faịlụ formats enweghị adịkwa mbụ àgwà nke faịlụ.
Complete codec n'ọbá akwụkwọ: A zuru ezu codec n'ọbá akwụkwọ e ike na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac-eme ka ọ na-akwado ndị ọzọ na-ewu ewu video edezi software nchịkọta dị ka iMovie, CutPro wdg
Ị nwere ike mfe download Wondershare Video Converter Ultimate for Mac na-enwe ya uru. Software dị na ma ikpe na akwụ ụgwọ version. Ebe a bụ obere stepwise nkuzi na ga-eduzi gị site na nzọụkwụ abuana ke converting gị VOB video faịlụ ka ihe iMovie dakọtara faịlụ Ọkpụkpọ:
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori software na mbubata faịlụ
The nnọọ Nzọụkwụ mbụ bụ ẹkedori Wondershare si Video Converter Ultimate for Mac site abụọ na ịpị na ya akara ngosi. Ozugbo software interface emepe, ị pụrụ ịhụ ọtụtụ nhọrọ. Otú ọ dị iji tọghata gị video, i kwesịrị mbụ mbubata video faịlụ n'ime interface. Ị nwere ike mbubata a VOB video faịlụ site na ma dọlite ​​faịlụ ka interface ma ọ bụ site n'ịhọrọ "tinye" button.
Nzọụkwụ 2: Họrọ dakọtara faịlụ Ọkpụkpọ
Ozugbo i dị na VOB video faịlụ na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac, ị nwere ike ugbu a na-amalite n'ezie akakabarede usoro. Site mmepụta format taabụ, họrọ ọ bụla iMovie dakọtara faịlụ Ọkpụkpọ. A ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats dị ka MP4, AVI, na MPEG dị maka akakabarede.
Nzọụkwụ 3: tọghata VOB faịlụ n'ime chọrọ faịlụ Ọkpụkpọ
Ozugbo ị họrọla chọrọ faịlụ Ọkpụkpọ, ị nwere ike ugbu a ngwa ngwa na-amalite akakabarede usoro site na ịpị "tọghata" button. Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Mara maka ya elu akakabarede ọsọ na ọ ga na-na-a nkeji ole na ole ka mezue akakabarede dabere na size nke video.
Nzọụkwụ 4: Import converted VOB faịlụ ka iMovie
Ozugbo ị converted faịlụ ka chọrọ mmepụta format, na nke pụrụ ịkpata faịlụ a ga-azọpụta kpọmkwem ọnọdụ. Mbubata na faịlụ a na iMovie, malite iMovie na pịa on 'ibubata' button.
Ọ bụrụ na ị nwere okosobode a dịruru ná njọ ebe iMovie dị nnọọ jụ mbubata a VOB video faịlụ, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịbụ na-eche ihe kpatara ya. VOB bụ a akpa usoro maka DVD na a adịghị anakwere faịlụ Ọkpụkpọ maka iMovie. iMovie akwado naanị kpọmkwem faịlụ formats dị ka MPEG-4, mpg, SWF, TS na HDV. Nkwado nke a kpọmkwem faịlụ Ọkpụkpọ na-webatara site tụnyere ndị codec maka na kpọmkwem usoro. Ọ bụrụ na ndị codec nke a kpọmkwem faịlụ Ọkpụkpọ na-efu, mgbe ahụ ka akpan akpan format gaghị akwado site na iMovie. A yiri nnọọ ihe mere n'azụ odida nke VOB video faịlụ ibubata bụ enweghị kwesịrị ekwesị codec mwekota na iMovie.
> Resource> iMovie> Olee mbubata VOB ka iMovie?